【कोरोमो-गाए अर्थात् मौसम अनुसार लुगा परिवर्तन】
"कोरोमो-गाए अर्थात् मौसम अनुसार लुगा परिवर्तन", जुन १ तारिखमा जाडोको लुगाबाट गर्मीको लुगामा परिवर्तन गर्ने चलन हो। किन एकैपटक सबै लुगा परिवर्तन गर्ने गरेको होला त?
लुगा परिवर्तनको यो प्रचलन, हेयान अवधिमा चीनबाट शुरु भएको थियो। मियानाका कार्यक्रमको रूपमा अर्थात् सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने राजदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा, वर्षमा दुई पटक लुगा बदल्ने गर्थे। एडो अवधिमा, किमोनोको विविधता बढेसँगै मौसम अनुसार वर्षमा चार पटक लुगा परिवर्तन गर्ने भनेर समुराई समाजद्वारा निर्णय गरियो अनि आम जनतामा पनि यो चलन फैलिएर गयो।
त्यसपछि मेइजी युगमा, अधिकारीहरू र सैन्य कर्मचारीहरूले पोशाक लगाउन थाले। क्यालेन्डर पनि
नयाँ क्यालेन्डरमा परिवर्तन भई गर्मीको लुगा र जाडोको लुगा वर्षमा दुईपटक फेर्ने चलन बन्यो।
लुगा परिवर्तन गर्ने यो चलन विद्यालय र घरपरिवारहरूमा पनि बिस्तार भई अहिलेसम्म पनि जारी छ।
やさしい日本語ラジオ講座 अर्थात् सरल जापानी भाषा रेडियो कोर्सको परिचय
यो कार्यक्रम, जापानी भाषा राम्ररी नबुझ्ने विदेशीहरू सबैका लागि हो, र यस कार्यक्रममा“सरल जापानी भाषा”मा बिस्तारै बोलिन्छ।
विदेशीहरुले जापानमा बसोबास गर्दा थाहा पाउनु पर्ने सूचनाहरुको बारेमा जानकारी दिईनेछ।
रेडियो प्रसारण, प्रत्येक शुक्रवार ११:५० बाट हो भने, पहिलो पटकको प्रसारण जुन ३ मा छ।
HIV परिक्षण सप्ताहको बारेमा
जुन १ देखि जुन ७ सम्मको १ हप्ता "HIV परिक्षण सप्ताह" हो।
रेइवा ३ मा, फुकुओका शहरको चिकित्सा संस्थानहरूले दिएको नयाँ रिपोर्ट अनुसार HIV संक्रमित व्यक्तिहरु २१ जना र एड्सका बिरामीहरू १८ जना थिए।
Life in Fukuoka "Nepali" Vo.25
जापानी भाषा（日本語） , नियम तथा आचरण（ルール・マナー） , कार्यक्रम तथा मनोरन्जन（イベント・娯楽）
【बृद्ध सम्मान दिवस】
जापानमा सेप्टेम्बरको तेस्रो सोमबार “बृद्ध सम्मान दिवस” ​​हो।
लामो आयु बाच्नु भएका समाजका बृद्धहरुलाई सम्मान गरि, उहाँहरुको दीर्घायु मनाउने बिदाको दिनको रुपमा रहेको छ।
यो वर्ष, यो दिवस सेप्टेम्बर २१ सोमबारमा परेको छI
सामान्यतया यो दिन, हजुरबुबा हजुरआमासँग खाना खाने, यात्रा गर्ने गरिन्छ, तर यो वर्ष कोरोनाको प्रभावले गर्दा, अनलाइन मार्फत् मनाउने लोकप्रिय हुन सक्छ।
यस अतिरिक्त, दिन फरक भए पनि, परिवारका सदस्यहरू र चिनेका बृद्धहरुलाई सम्मान र राम्रो स्वास्थ्यको कामना गर्ने दिनको रूपमा, जापान मात्र नभई अमेरिका, क्यानाडा, चीन, र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूमा पनि मनाईन्छI
साइकल बीमाको बारेमा
यो साइकल चलाउनेहरूको लागि सूचना हो।
फुकुओका शहरले नियम संशोधित गरि, २०२० अक्टोबर १ देखि, फुकुओका शहरमा साइकल चालकहरूले साइकल बीमामा अनिवार्य सामेल हुनु पर्ने गरिएको छ।
काम, स्कूल वा किनमेल आदिमा जाँदा साइकल चलाउनेहरु, कम्पनीको काममा साइकल चलाउने व्यक्तिहरु वा साइकल भाँडामा लिने कम्पनिको व्यक्तिहरुले अवश्य पनि बीमामा सामेल हुनहोस्।
बच्चाले साइकल चलाउँदा, बुबा वा आमा जस्ता अभिभावकसँगै जाने गर्नुहोस्।
साइकल दुर्घटना भयो भने, तपाईंले दुर्घटनामा परेको व्यक्तिलाई धेरै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
साइकल चलाउने व्यक्तिहरुले, हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षतिपुर्तीबाट बच्न, साइकल बीमा लिनु पर्छ।
अवश्य पनि, हामी सबैले ट्राफिक नियमहरूको पालना गर्ने गरौँ!
"फुकुओका केन्तेइ" अर्थात् "फुकुओका टेस्ट" को बारेमा
तपाईंहरुलाई फुकुओकाको बारेमा कत्तिको जानकारी छ होला?
जस्तै "फुकुओका र हाकाता बीच के भिन्नता छ?" त्यस्तै "बारिखाटा भनेको के हो?"
फुकुओका शहरमा, फुकुओकालाई अझ व्यापक र गहिरो रुपमा जान्ने "फुकुओका डोरी" को संख्या बढाउनको लागि, फुकुओका केन्तेइ अर्थात् "फुकुओका टेस्ट" लिंदैछौँI
यदि तपाईंले "फुकुओका टेस्ट" पास गर्नुभयो भने, तपाईंले पर्यटक सुविधाहरूमा छुट पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै बिभिन्न संग्रहालयहरू, साथै नि: शुल्क उपहार पनि पाउन सक्नु हुनेछI
"फुकुओका टेस्ट" को होमपेजमा, परीक्षाको बारेमा जानकारीको अतिरिक्त, फुकुओकाको ईतिहास र संस्कृति एक खेल जस्तै अध्ययन गर्ने, फुकुओकाको आकर्षण प्रस्तुत गर्ने भिडियो हेर्ने र रमाईलो गर्दै फुकुओकाको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छI
अझै तपाईंलाई थाहा नभएको फुकुओकाको धेरै आकर्षणहरू छन्!
कृपया होमपेज हेर्नुहोला र फुकुओका-डोरी बन्नु होला।
होमपेज रहेको छ, fukuokakentei.com
त्यस्तै, बारिखाटा भनेको हाकाता रामेनको चाउचाउ हो,यो उमालेको हुन्छ!
यावा, खाटा, बारिखाटा, हारिगाने आदि, तपाईलाई मन पर्ने उमालिएको चाउचाउको कडापन अनुसार मगाउने शब्दहरु हुन्I
बारिखाटा सामान्य चाउचाउ भन्दा कडा हुन्छ।
के तपाईंलाई यो थाहा थियो?